Hoy la'anta carruurta ku haysata Muqdisho oo halis galinaysa xasilloonida bulshada - Sabahionline.com
Hoy la'anta carruurta ku haysata Muqdisho oo halis galinaysa xasilloonida bulshada
Waxaa qoray Maajid Axmed oo Muqdisho jooga
Nofeembar 07, 2012
Carruunta darbiyo-jiifka ah ee ku nool Muqdisho, oo ah dhibbaneyaasha la iska illaaway ee colaadaha iyo macluusha Soomaaliya, ayaa halis ugu jira dullinimo badan, sida cudur, isticmaal maandooriye iyo fara-xumeeyn jinsiyeed --- dhibaatooyinkaa oo ay dhaq-dhaqaayashaasu leeyihiin waxay halis ku yihiin xasiloonida bulsho. Wiil ku dul fadhiya raso qashin ah oo taal Muqdisho. Carruurta darbiyo-jiifka ah waxay inta badan seexdaan dhismayaasha burburay iyo luuqyada caasimadda. [Maajid Axmed/Sabahi]
Carruur badan oo darbiyo jiif ah ayaa halis ugu jiraan isticmaalka maadooriyaha oo ay dhibbaneyaal u noqdaan fal-dambiyeedyada. Wiilka ku jira dhexda wuxuu jiidayaa dhalo koollo ah. [Maajid Axmed/Sabahi]
Al-Amriiki oo codsaday faragalin si loo xalliyo 'kala qaybsanaanta’ ka dhex jirta al-Shabaab
Soomaalida oo diiday sheegashada al-Shabaab ee ku aaddan talaalka dabaysha
beeralay Soomaali ah oo dib ugu labanaya goobohii al-Shabaab laga xoreeyay
Iyadoo aysan jirin tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyay carruurta darbiyo jiifka ah, ayuu Santuukha Qaramada Midoobay ee Carruurta (UNICEF) iyo hay'ado gargaar oo maxalli ahi waxa ay 2008-dii ku qiimeeyeen in ugu yaraan 5,000 oo carruur ah ay ku nool yihiin waddooyinka Muqdisho.
"Waxay u muuqataa in tiradooda ay kordhayso maalinba maalinta ka dabmaysa," ayuu yiri Maxamed Nuur Salaad oo ka tirsan Shabakadda Dhowrista Carruurta, oo ah koox u doodda carruurta. "Hadda waxaa jira kumanaan carruur ah oo da'doodu u dhaxayso toddobo illaa 16 kuwaas oo ku nool waddooyinka Muqdisho, oo badankoodu yihiin wiilal."
"Tiro badan oo carruurtan ah waxay ku nool yihiin xaalado aad u fool xun, iyagoo si rasmi ah ama ku-meel-gaarnimo rasmi ku dhow gabbaad uga dhigta waddooyinka iyo dhismayaasha baylaha ah," ayuu u sheegay Sabahi. "In badan oo ka mida ayaa maandooriye isticmaala, taasoo sababtay halis ammaan iyo mid bulsho."
Si ay u daboolaan baahiyahooda maalinlaha ah, carruur badan oo kuwa darbiyo jiifka ah ayaa qabta shaqooyin hooseeya sida kabo baalashidda iyo gawaari dhaqidda, iyadoo kuwo kalena ay aruuriyaan qashinka ama haraadiga qaadka si ay dib uga iibiyaan dadka qabatimay.
Salaad wuxuu sheegay in carruurta darbiyo-jiifka ahi marka ay habeenkii seexdaan waddooyinka ay u dayacan yihiin dagaal maskaxeed iyo mid jismi, si-xun ula dhaqan, iyo si xun uga faa'idaysasho duruuftooda adag. "Laakiin xitaa halista taas ka sii daran waa xaqiiqda ah in carruurtaa darbiyo-jiifka ahi ay baylah u yihiin kooxaha xagjirka ah oo u shaqaalaysiiya falalka argagixsada," ayuu yiri.
Salaad ayaa dawladaha iyo ururrada aan dawliga ahayn ee u taagan xuquuqda carruunta waxa uu ugu baaqay in ay qaadaan tallaabooyiin degdeg ah si loo xalliyo dhibaatadan inta ayan ka sii darin.
Faqriga iyo kala tagga qoyska ayaa carruurta bada waddooyinka
"Barakac joogto ah, hoy la'aan, faqri iyo burburka qoyska ayaa ka mida sababaha ugu wayn ee tooska ah ee baday carruurta inay ku noolaadaan waddooyinka sannadihii yaraa ee la soo dhaafay," ayuu yiri Cabdisamad Cabdullaahi, oo ah dhaq-dhaqaaqe u taagan xuquuqda carruurta oo ka tirsan Kalmo, oo ah urur aan faa'iido doon ahayn oo saldhiggiisu yahay Muqdisho.
Wuxuu sheegay in agoomo badan la baday inay waddooyinka ku noolaadaan. Faqriga iyo kala tagga qoysaska ayaa sidoo kale door muhiim ah ka qaata in waddooyinku noqdaan "khiyaarka ugu dambeeya iyo baddiilka macquulka ah ee carruurtaasi haystaan".
"Marka carruurtan ay ku koraan waddooyinka, waxa ay u badan tahay inay ku biiraan burcadda faraha kula jira dambiyada ama ay dhibanayaal u noqdaan isticmaalka maan-dooriyaha," ayuu yiri, isagoo intaas ku daray in ay waajib tahay in carruurtaa dib loogu soo dhex celiyo bulshada si looga hortago aayatiinkaas. Maxamed Deeq Xasan, oo 14-jir ah, wuxuu sheegay inuu billaabay ku noolaanshaha waddooyinka kaddib markii uu waayay labadiisa waalid shan sano ka hor.
"Waxaan labadayda waalid waayay markaan jiray sagaal sano mana jirin qof i xannaaneeya sidaas darteed waxaan billaabay inaan ku noolaado waddooyinka," ayuu u sheegay Sabahi. "Nolosha waddooyinka waa mid aad u arxan daran laakin ma heli karo meel kale oo aan ku noolaado."
Xasan wuxuu sheegay inuu sanka ka qaato koollada si ay muddo kooban uga qaaddo dhibta. "Marka aan sanka ka jiido koollada waxaan hilmaami karaa xaaladaha xun ee aan ku noolahay waxaanna dareemaa nooc farxad mala-awaal ah," ayuu yiri. "Waxaan mala-awaaali karaa inaan dayaxa saaranahay mar marka qaarna waxaan ku riyoodaa anoo jooga Yurub ama Ameerika waanna hilmaamaa dhammaan dhabaatooyinka igu haysta Muqdisho."
Gabbaadka ugu horreeya ee carruurta darbiyo-jiifka
So loo fududeeyo dhibaatada haysata carruurta darbiyo-jiifka ah, Ururka Horumarinta Bulshada oo ah urur saldhiggiisu yahay Muqdisho, oo ah urur-diimeed diiradda saara taageeridda iyo adeegyada Soomaalida barakacday, ayaa furay xaruntii ugu horreeysay ee Muqdisho ku taalla oo lagu caawiyo carruurta darbiyo-jiifka ah.
Xarunta Mawahib ayaa hoy u ah ku dhowaad 80 carruurta darbiyo-jiifka ah, kuwaas oo badankooda ah agoon da'doodu u dhaxayso toddoba illaa 14 sano, waxayna siisaa daryeel caafimaad, cunto, dhar iyo waxbarasho, sida uu sheegay agaasimaha xarunta Cumar Axmed.
"Markii aan dareennay in dhibaatada ay ka sii darayso, waxaan go'aansannay inaan xarun furno si aan gabbaad u siinno una dhaqan-celinno carruurta darbiyo-jiifka ah. " Tallaabadan ayaa looga golleeyahay in lagu yareeyo saamaynta ka timid hoy la'aanta iyo baadiyoowga carruurtan."
"Soomaalida oo dhan -- dadka iyo dowladdaba -- waa inay ka shaqeeyaan badbaadinta nolosha iyo mustaqbalka carruurtan oo laga heli karo waddooyinka Muqdisho oo dhan," ayuu u sheegay Sabahi. "Dhammaanteen mas'uuliyiin ayaannu nahay waana inaan fulinnaa waajibaadkeenna diimeed iyo tan daleed sifo aan carruutaa dib ugu soo celinno bulshada looguna beddelo awood bini'aadam oo wanaagsan halkii ay ka noqon lahaayeen bam-waqtiyeed mar walba qarxi karta." "Haddii carruurtan la dhaqan-celiyo, waxay noqon karaan hoggaamiyeyaasha mustaqbalka," ayuu yiri. "Laakiin haddii aan waddooyinka ku dhaafno, waxaa naga lumaya jiil dhallinyaro ah oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan."
anigu waxan racsanahaya walakay khadar willka qoraya bagka ugu danbeeya kulaya way jiran darbi jif melkasto calamka ka mid ah lakin inan si shacino maha inag oo dan gar ka leh carurtan walalay ilahay aya waxa cawiya lakin inti karankayag wan cawinayan idinka sawrradan so dhigayan waxan idin sheegaya inad ka dayasan waxan oo kale caruurta wayo morali uma fiican
walaal layaal waxaan doonaynaa caruurta Somaliyeed ee ku dayacan Moqdish in aan Kaalmayno si wada jir ah.
NALA SOO XIRIIRA HADDII ALLE IDMO
saxiibka marka aad u baahantahay ku caawiya ayaa dhab ahaantii saaxiibkaa ah. marka xukuumadda iyo dadka reer kenya guud ahaamba waa inay gacmaha is qabsadaan si ay arrinkan u dabar gooyaan, waayo laba maskaxood ayaa ka wacan maskax kaliya
wuxu ilayahay qaral dhab ah oo maco xambarsan taas waxy kutusaa iney jiro dad wali kashaqeyna dhiragalinta mahadsanid qoraga ala yacisag
Xukuumada muqdisho waa inay ku dadaashaa inay caruurtaasi marlabaad farxad iyo nabadgelyo helaan, taasina maaha masuuliyad ku kooban xukuumadda soomaaliyeed ee waa arrin ay tahay in dunida oo dhami ay fiiro gaar ah u yeelato, arrinkaas oo ah caruurta darbi jiifka ah ee dalalka kala duwan ka jira
waar ku wiinan soo dhigay caruurta darbi jiifka ah wabsayd yada idinka ayaa ka waalanba waayo hadii aad wax uqaban karaysaa u qabta oo meesha hanagu ceebaynina caalamka laguma arag dawlad dadkeeda soo dhigta wabsiteka waayo waxaasi inooma fiicna hadii aynu soomaliwayn nahay thanks